Nhau - Iyo firita chinhu chemunatsi wemvura chinofanira kuchinjwa kazhinji. Zvinoita here kuramba uchizvishandisa? Iwe uchanzwisisa mushure mekuverenga
Iyo firita chinhu chemunatsi wemvura chinofanira kuchinjwa kazhinji. Zvinoita here kuramba uchizvishandisa? Iwe uchanzwisisa mushure mekuverenga
Iyo firita yezvinhu zvemumba-yakaiswa mvura yekuchenesa inoshandurwa kazhinji. Ndingakwanise kuisuka ndoramba ndichiishandisa? Izvi hazvina kunaka!
yekuchengetedzwa kwekushandiswa kwemvura zvachose, Tinotenda kuti dzimba zhinji dzakaisa zvinonatsa mvura. Iyo pombi yemvura inoyerera ichibuda mushure mekucheneswa neyeyo yekuchenesa mvura uye inosvinwa kuita iyo mhando yemvura kuchenesa zvakanyanya. Iyo pombi yemvura inogona kunatswa, kusvika padanho rakakura, iyo kiredhiti yechinhu chesefa. Imwe neimwe firita zvinhu zvinonatsa sosi yemvura, uye pakupedzisira iyo firita chinhu inovhara tsvina.
Nekuda kweizvi, chinhu chesefa chichava chakasviba mushure menguva yakareba yekushandisa, uye icharasikirwa nebasa rekuchenesa mvura. Panguva ino, chinhu chesefa chinoda kutsiviwa kuti chirambe chichiisa mvura yekuchenesa. Mushure mekushandisa iyo yekuchenesa mvura, shamwari zhinji dzataura dambudziko, ndokuti, mutengo wekushandisa yekuchenesa mvura kutsiva iyo firita element ichakurumidza kupfuura mutengo wemunatsi wemvura.
Muchokwadi, izvi ndizvo zvazviri. Mutengo wekuchenesa mvura ungangoita zviuru zvidimbu. Nekudaro, iyo yekuchenesa mvura ine akati wandei mafirita zvinhu, mamwe gumi nemaviri mafirita zvinhu, uye mamwe mazana ezvesefa zvinhu, uye zvimwe firita zvinhu zvinotora mwedzi yakati wandei. Inoda kutsiviwa kamwe chete pamwedzi mitanhatu kana kamwe chete pagore. Mutengo wechinhu chesefa pamwe nemutengo wepa-saiti wekutsiva chinhu chesefa chaicho chakanyanya kukwirira.
Dzimwe shamwari dzakapa zano rekuti sezvo zvichidhura kwazvo kuchinja firita, unogona kuiburitsa wogeza wega wobva waishandisa? Geza nemvura woisa zvekare mukati, zvingakanganisa mashandisiro acho here?
Chekutanga pane zvese, chimiro chechinhu chesefa hachizi chakareruka sekufunga kwedu. Iyo firita chinhu chakakamurwa kuita akasiyana maturu ekusefa akasiyana akura uye madiki marara. Tinotora chinhu chesefa, uye zvese zvatingaite kusvina pamusoro pechinhu chemafirita nemvura. Izvo chaizvo zvinokwanisika kusuka zvimwe zvakasviba, asi zvine mashoma maitiro.
Iyo nyowani firita chinhu inowanzo chena muchitarisiko, uye inogona kuve nhema kana brown mushure mekushandisa kwenguva yakati. Uku ndiko kushambadzira kwehumwe hutsvina. Izvi zvinhu hazvigone kushambidzwa chete nekugeza nemvura. Kunyangwe kana iyo nzvimbo yakachena, iyo yekusefa mhedzisiro haisi hazvo Inogona kuvimbiswa kuti munhu wese anotenga mvura yekuchenesa kugadzira sosi yemvura kuchenesa, uye inotsiva isina kuchena firita chinhu. Muchokwadi, ichiri kusvibisa sosi yemvura.
Naizvozvo, kune hutano uye kuchengetedzwa kwekufunga, haufanire kunonoka kutsiva chinhu chesefa uye chenesa firita chinhu iwe. Kushandisa zvine musoro firita chinhu kunogona kuita kuti munatsi wemvura unatswe zvechokwadi. Maitiro ekuchenesa mvura akave nekuchinja kukuru. Vamwe vanonatsa mvura vane chinjana chiri nyore chesefa chinhu. Unogona kutenga iyo firita chinhu iwe kuti utsive. Kune zvakare zvinhu zvitsva izvo zvakashandiswa kwenguva yakareba. Kana iwe usiri kuda kuchinja iyo firita chinhu kazhinji, Unogona zvakare kutsiva yechinyakare-yekuchenesa mvura mumba mako neyakareruka.